Haddii aad mar uun in forum sameeysa computer ee ah, waxaa dhici karta inaad dareentay badan oo muran ku wareegsan Flash Adobe ka Player iyo wax xidhiidh la leh. Dhab ahaantii, si fudud xusay erayga "Flash" inta badan waa ku filan si ay u soo diri ugu firfircoon ee horumarinta galay cadhaysan frothing. Sidaas, waxa heshiis weyn la Flash iyo waxa aanu FLV leedahay in la sameeyo waxa la sugayo
Qaab file FLV waa gaaban Flash Video. Waxay bilaabeen nolosha ee 2003 la sii daayo Adobe Flash Player 6 iyo markii hore loogu tala galay oo tayo sare leh durdurro-waqtiga dhabta ah is-dhexgal. FLV ayaa waxaa loogu tala galay in ay noqdaan isku micne ah ee hab buuxda u immersive in samatabbixin content video in qof walba la Flash plugin browser. Inkasta oo ay u ma arrin ku guulaystaan ​​ay noqonayaan sida la xiriira sida abuura ay rajaynayeen, files warbaahinta FLV weli waxaa loo isticmaali karaa in ay is dhaafsadaan xogta la server Media Adobe Flash.
Dhibaatada cad oo habkani leeyahay waa in laga furay user in tiro ka mid ah arrimaha amniga iyo arimaha gaarka ah, taas oo ah, neceenna raalli horumarinta midbaa ugu. Sidaas, halka ay u dagaalamayaan inay sabab u sharaf ah samaynta cyberspace ku meel amaan ah, aynu eegno sida ugu fiican ee loogu badalo MP4 in FLV.
Part1: Best MP4 in FLV Video Converter
Part2: MP4 Free in FLV Converter
Part3: MP4 Online in Converter FLV
Part4: Dooro MP4 in FLV Video Converter in adiga kugu habboon
Part5: Aqoonta Extended u FLV iyo MP4 Qaabka
Wondershare Video Converter Ultimate (WVCU u oran gaaban) waa barnaamij aad u functional oo dabacsan. Heli $49.97, WVCU waa Begovic, fududahay in la isticmaalo iyo aad u degdeg ah. Waxa aanu doofaar khayraadka iyo waa la isticmaali karaa garab barnaamijyada kale ee aad ama si fudud la yareeyo iyo illoobay oo ku saabsan halka aad cid kale wax ka qabanayso. Weli wanaagsan, kartiyeed weyn ka dhigan tahay in lagu rakibi karo mashiinka low-dhamaadka ah iyo sida loo isticmaalo maalin kasta daaha nidaamka qalliinka la'aan, baraf ama hartay.
Oo dhan rakibo WVCU ka kooban waxyaabaha dhowr guraa, kuwaas oo dhammaantood kasta oo kale oo dhamaystir u flawlessly. Waxaa jira Media Wondershare ee Server, kaas oo kaa caawinaysaa in aad raalli ka PC qulquli in TV ama qalab kasta oo ay taageerayaan in ka mid click kale; Wondershare Video taariikhqorihii, taas oo qabsatay qayb ka mid ah ama dhan aad desktop iyo badbaadiyay tallaabo way ku galay file warbaahinta ah; ugu dambeyntii, waxaa jira barnaamijka Converter laftiisa.
WVCU ogolaan doonaa in xitaa ugu casriga-Jarmaka user inay u beddesho MP4 ama qaab kale oo file warbaahinta wax galay FLV fudayd 'iyo badalo karo files galay noocyo kala duwan oo ah qaabab, oo dabooleysa dhammaan saarayaasha casriga ah iyo dhammaan consoles'ka ciyaarta video, oo ay ku jiraan PS Vita.
Sida loo Beddelaan MP4 in FLV Isticmaalka Wondershare Video Converter Ultimate?
Marka hore, guji badhanka "Add Files" guji file MP4 bartilmaameedka.
Marka file waxaa ku raran yihiin, aad xaalkaa kartaa adigoo gujinaya on the "Edit" button ka dibna u jar, ku dar subtitles ama watermark ah. Haddii kale, waxaad edit karaa metadata file ee adigoo gujinaya ee "i".
Riix menu dropdown ku yaal hoos ku "Qaabka Output" awaamiirta iyo doortaan qaab FLV ah. Marka aad diyaar tahay, riix batoonka "Beddelaan".
Marka taxan ee cagaaran u muuqataa, in aad file waa diyaar. Sidoo kale, wargelin saxaarad hawl arbushin doonaa in koonaha midig ee shaashada la "Folder Open" doorasho. Xaaladdan ayaa seegi adiga ama la xiro ogeysiiskan, riix "Open Folder" oo ku yaalla xagga hoose ee suuqa kala Converter ah.
Waayo, kuwa naga mid ah oo aan la wareeriyay ku akhrisan karaa print wanaagsan, waxaa jira qalab ka dhigi kara nolosheena fudud. Laakiin, marka ay timaado in software, oo dhan waxa ay qaadataa waa mid ka mid baaragaraafka slyly qallocan galay bog, taasoo keentay in la helo geeddi dadejiyaan la rakibo ama barnaamij ka noqaan rakibtay barnaamijyada aan la rabin in la sameeyo naga doonayaan inay ku tuuraan gacmaheennuu ilaa iyo weligiis siin on fikradda software ah oo lacag la'aan ah. Ugu danbeyn, users leeyihiin dalabka aad u fudud -. Iyaga siin software shaqeeya Wondershare Video Converter Free (WVCF u oran gaaban) waa mid ka mid ah kuwa barnaamijyada in si fudud u shaqeeyaan. Kaliya ma ahan, laakiin waxa dhab ahaan waa wax wanaagsan.
WVCF waa xal hal-stop in diinta files warbaahinta u jeesta computer desktop aad galay mashiin Beddelka awood leh, si fudud u qaadan files warbaahinta iyo soo saara wax gaar ah ku habboon kasta oo qalabka aad ah. Filo in ay leeyihiin dhammaan qalabka aad la hir-soo socota si ay computer ka diyaarin la WVCF, sidii ay u bedeli karaan files warbaahinta in ay ku haboon qaabab file hooyo ee dhammaan qalabka bilabo. Tan waxaa ku jira oo dhan consoles'ka iyo casriga ah ee waaweyn. Xataa si fiican, haddii qalab aan hadda taageeray, waxa doono u badan tahay in ay mustaqbalka dhow, sida update kasta oo cusub inay WVCF waxaa ku daray taageero u qaabab ka sii, sida WTV, OGV, MXF, VRO in 6.5 ka. 0 version. In eray keliya - cabsi badan.
Sida loo Beddelaan MP4 in FLV Isticmaalka Wondershare Video Converter Free?
Ku dar file MP4 diirada si WVCF oo ay soo jiitaa & dhibic ama adigoo gujinaya ah "Add Files" button. Haddii aad rabto in lagu daro in ka badan hal file oo iyaga ku milmaan galay file hal, calaamadee sanduuqa hoose oo cinwaankeedu ahaa "midowdo oo dhan videos galay mid ka mid file", kaas oo ah hab fiican oo in la abuuro compilations iyo DIY-albums.
Riix menu dropdown ka xigay xaga midig iyo dooran FLV (Fiiro gaar ah: helaa oo keliya version of Pro WVCF, qiime jaban ah $ 39.95).
Waxaad edit karaa file ka hor inta qaab beddelidda adigoo riixaya "Edit" button iyo falinjeeerka ama subtitling video ah.
Marka aad ku qanacsan tahay isbedelada, riix badhanka badalo iyo sug barnaamijka dhammayn. Taxan ee cagaar ka soo muuqan doona oo aad u dhigay!
MP4 Free in FLV Video Converter
Best MP4 in FLV Video Converter
Description Qaab file warbaahinta tayo-sare, markii hore loogu tala galay in lagu isticmaalo screencasts iyo is-dhexgal durdurrada on-baahida.
MP4 waa qaab aad u caan ah oo weel isticmaalay ku kaydiso video, audio, iyo xogta subtitles. Dukaamada sida Lugood isticmaalaan qaab weelka iyo waxa loo isticmaalo badadanaa oo dhan Qalabka telefoonada gacanta.
MIME Type video / x-flv video / mp4
Ciyaartoyda FLV Best u Android
FLV Player: Sida loo ciyaaro files FLV
> Resource > MP4 > Sida loo Beddelaan MP4 in flv la Loss Tayada Zero